အော့ဖ်လိုင်း OneNote ဖိုင်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်သိမ်းထားသနည်း။ - Onenote
အဓိက > Onenote > Onenote အော့ဖ်လိုင်းဖိုင်များ - မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်
Onenote အော့ဖ်လိုင်းဖိုင်များ - မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်
အော့ဖ်လိုင်း OneNote ဖိုင်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်သိမ်းထားသနည်း။
Windows 10 တွင်သင်၏အတွက် Backup ဖိုင်တွဲရှိသည်မှတ်စုစာအုပ်ကို C မှာတည်ရှိသည်: \_ အသုံးပြုသူများ \_ အသုံးပြုသူအမည် \_ AppData \_ ဒေသခံ \_ ကို Microsoft \_OneNote\_ ဗားရှင်း \_ Backup ကို။ Windows Vista က, သင့်အဘို့အ Backup ကိုဖိုင်တွဲတွင်မှတ်စုစာအုပ်ကို C မှာတည်ရှိသည်: \_ အသုံးပြုသူများ \_ အသုံးပြုသူအမည် \_ AppData \_ ကို Microsoft \_OneNote .0 \_ Backup ကို။
ငါ၌ဆောင်းပါးအသစ်များအတွက်အကြံဥာဏ်များရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ် ဦး ကပြောပြရုံသာမက app တစ်ခု၏အမည်ကိုရေးရန်လိုအပ်သည်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောနေရာများတွင်စုဆောင်းသူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှစည်းညှိတယ်။ သူတို့ထဲကအတော်များများဟာတွင်းနက်ကြီးထဲကိုကျသွားတယ်။
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်သည် OneNote အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်အချို့နှင့်၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုလိုကြောင်းမျှဝေပါမည်။ (မကျေနပ်သောတေးဂီတ) ကျွန်ုပ်တို့မစတင်မှီယနေ့ဆောင်းပါးကိုထောက်ပံ့သောအတွက် Skillshare အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Skillshare သည်သင်ခန်းစာများစွာနှင့်အတူသင်ယူမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအခါငါနှစ်လအခမဲ့ပရီမီယံ access ကိုပေးသောသင်တို့အဘို့အထူး link ကိုရှိသည်။ ၎င်းကိုဤဆောင်းပါး၏ဖော်ပြချက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်အဆုံးဆီသို့အကြောင်းပိုမိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ညှိနေဖို့။
သူကမင်းမှာအကြံဥာဏ်တွေရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြင်ပန်းဒီဇိုင်းစိတ်ကူးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသိမ်းဆည်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖို့လိုတယ်။ OneNote သည်ကျွန်ုပ်အတွက် ၀ င်ရောက်လာသည်။
OneNote ဒစ်ဂျစ်တယ်မှတ်စုစာအုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တကအများကြီးပိုထက်ပါတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဤဆောင်းပါး၏အဆုံးအားဖြင့်ငါနှင့်အတူအသဘောတူလိမ့်မယ်သေချာပါတယ်။ ငါ့ OneNote ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအကြံပေးချက်များကိုသွားကြည့်ရအောင်။
နံပါတ်တစ်၊ သင်ကိုယ်တိုင်စီစဉ်ရန်အဆင့်ဆင့်ကိုသုံးပါ။ OneNote ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဆင့်ဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ အဓိကအဆင့်သုံးဆင့်ရှိသည်။ အမြင့်ဆုံးသည်မှတ်စုစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်စုစာအုပ်ကဲ့သို့စာမျက်နှာများစွာပါ ၀ င်နိုင်သည်။
သင်၏ချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်မှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်သည်ဆိုပါစို့။ ငါတို့ကညာဘက်ကိုနှိပ်ပြီး New Notebook ကိုရွေးပါ။ အောက်ကမှတ်စုစာအုပ်ကိုထည့်ပါ။
ဤမှတ်စုစာအုပ်မှကဏ္differentများသည်ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စတင်သူများအတွက်ကဏ္ create တစ်ခု၊ အဓိကသင်တန်းများအတွက်တစ်ခု၊ သက်သတ်လွတ်ဟင်းလျာများအတွက်တစ်ခု၊ အချိုပွဲများအတွက်စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၌ထိုအကြံဥာဏ်ရှိသည်။ ကဏ္Withinများအတွင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တကယ်စာရွက်အတွက်သီးခြားစာမျက်နှာများကိုထည့်ပါ။
ဒီနေရာမှာဆန်မှိုဘာဂါတစ်မျိုးကိုငါတို့မှာတွေ့နေရတယ်။ ကျနော်တို့ပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်, ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ကျနော်တို့ဓါတ်ပုံတွေကို add နှင့်ကျွန်တော်အနေဖြင့်စာရွက်တယ်ဘယ်မှာပင် link ကိုပေးနိုင်သည်။ ဤချက်ပြုတ်နည်းများအပြင်၊ သင့်တိုးတက်မှုအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္withများပါသည့်ဆောင်းပါးများအတွက်အကြံဥာဏ်များအတွက်မှတ်စုစာအုပ်များရှိသည်။
ကျွန်ုပ်မှာစျေးဝယ်စာရင်းများ၊ အားလပ်ရက်များစသဖြင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေအတွက်မှတ်စုစာအုပ်ရှိသေးတယ်။ အကယ်လို့အဆင့်ဆင့်အဆင့်ဆင့်များလိုအပ်ပါက၊ ကဏ္ multiple မျိုးစုံကိုအုပ်စုလိုက်အုပ်စုဖွဲ့နိုင်သည်၊ အုပ်စုများသို့ကဏ္sectionsများကိုသင်ဆွဲယူနိုင်သည်။ သင်ဖန်တီးနိုင်သောနောက်အလွှာတစ်ခုသည်စာမျက်နှာငယ်များဖြစ်သည်။
၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုရန်သင်သည်ကဏ္aတစ်ခုတွင်အနည်းဆုံးစာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာရှိရမည်။ ဒီတော့ဒီမှာငါ Excel Conferences မှအစည်းအဝေးမှတ်စုများပါသောစာမျက်နှာရှိတယ်၊ အပိုင်းငယ်တစ်ခုစီအတွက်မှတ်စုများဖြင့်အသက်ငယ်ခွဲများကိုဖန်တီးနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါက Session Notes Excel Conference Bulgaria နှင့်အစည်းအဝေးတစ်ခုစီအတွက်စာမျက်နှာခွဲများရှိသည်။ စာမျက်နှာခွဲများဖန်တီးရန်နှိပ်ပါ။ သင်စာမျက်နှာခွဲတစ်ခုဖွင့်လိုသည့်စာမျက်နှာသို့သွားပြီး Make Subpage Make ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဒါဟာခေါင်းစဉ် Indent ပါလိမ့်မယ်။ Subpage တစ်ခု၏အောက်ခြေတွင်ဖော်ပြထားသော subpage အတွက်သင့်တွင်မတူညီသောအလွှာတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ငါမကြာခဏဒီကိုမသုံးကြဘူး, သင်မူကားမှတ်စုတွေအများကြီးရှိသည်နှင့်အသေးစိတ်တည်ဆောက်ပုံလိုအပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကအရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နံပါတ်နှစ်မှာသင်လိုချင်တဲ့အရာကိုရှာရန် tags များကိုသုံးပါ။ အမှတ်အသားများသည်မှတ်စုများကိုခွဲခြားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မှတ်စုများကိုကျွန်ုပ်၏ယေဘုယျဆောင်းပါးစိတ်ကူးများမှတ်စုစာအုပ်၌မှတ်စုတူတစ်ခုတည်း၌မပါ ၀ င်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်ပါ ၀ င်သည့် M Query လေ့လာရန်မှတ်စုများရှိသည့် Power Query အတွက်ဖြစ်သည်။ ဒီငါသည်ဤမကြာမီလုပ်နေတာစဉ်းစားရန်လိုခငျြတစ်ခုခုဆိုပါစို့။
အပေါ်ကဤမှတ်စု dropdown tag ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မှတ်စုများသို့မဟုတ်မှတ်စုများ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထည့်သွင်းဖို့အတွက် default tags အမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်ရွေးနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်မို့မေ့မထားပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်၏သုတေသနအတွက်အခြားမှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုတွင်ဘားကုတ်စာဖတ်သူအတွက်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုကြည့်ရှုရန်စာမျက်နှာတစ်ခုကျွန်ုပ်ရှိသည်။
Save for Later ဟုမှတ်သားထားသည့်မှတ်စုများအားလုံးကိုသင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်လိုသည်ဆိုပါစို့၊ သင်ဒီမှာလုပ်ရန်မှာဘယ်ဘက်ရှိ search icon ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်ရှာဖွေမှုဘားကိုနှိပ်ပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော tags များမှရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာကိုရိုက်ထည့်ပြီးသင်လိုချင်သောနေ့ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်ဤ tag ပါသောမှတ်စုများအားလုံးစာရင်းကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
သင်သာမန် tags များကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်၏ကိုယ်ပိုင် tag tag များမှတဆင့်သင့်ကိုယ်ပိုင် tag စနစ်ဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ သင်လုပ်ရန်မှာအောက်ခြေရှိ Create New Tag ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်၎င်းကိုအမည် ပေး၍ ၎င်းအတွက် icon တစ်ခုရွေးနိုင်သည်။ OneNote ၏ယခင်မူကွဲများကဲ့သို့သင်လုပ်နိုင်သည်။ အသစ်များကိုအောက်တွင်ထည့်သည်၊ ကုန်းကြောင်းမသွားဘဲ Custom tags အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်မထားပါနှင့်။
ဒါကြောင့်မှတ်စုများကိုခွဲခြားရန် tags များကိုသုံးပါ။ tags အတွက်များစွာသောအသုံးပြုမှုတွေရှိပါတယ်၊ သင့်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီသာသုံးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုပါစို့။ သင့်အဖွဲ့ ၀ င်များအားသင်ပေးအပ်ထားသောတာဝန်များကိုခြေရာခံချင်သည်ဆိုပါစို့သို့မဟုတ်သင်၏လေ့လာမှုမှတ်စုများမှအရေးကြီးသောအပိုင်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အသုံးပြုသည်။
lvuvc64.sys ပြတင်းပေါက် 10
သင်လိုအပ်သည့်အခါသင်လိုအပ်သောအရာကိုရှာဖွေရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။ နံပါတ် (၃)၊ အတွေးအခေါ်များကိုနေရာတိုင်း၌ကပ်ပြီးမှတ်စုများဖြင့်ရေးချပါ။ ငါထွက်ခွာသွားသောအခါငါစာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်တွင်မမေ့လိုသောအရာများကိုရေးမှတ်လိမ့်မည်၊ သို့ဖြစ်လျှင်သူတို့ပျောက်ဆုံးသွားခြင်းသို့မဟုတ်ငါအချိန်များစွာကုန်လွန်ခြင်း၊ ငါ့နောက်ကျောကိုရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ငါ Sticky မှတ်စုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Sticky Not's ကိုဖုန်းပေါ်ရှိ OneNote အက်ပ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ တကယ်လို့တစ်ခုခုကိုမြန်မြန်ရေးချင်ရင် OneNote app ကိုဖွင့်ပြီးအောက်က Sticky Notes ခလုတ်တွေကိုနှိပ်ပြီးစရေးပါ။
ကျွန်ုပ်၏ယခင်စုဆောင်းထားသည့် Sticky Notes များအားလုံးကိုဤနေရာတွင်လည်းရှာတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရုံးသို့ပြန်လာပြီးဤမှတ်စုများကိုကြည့်လိုသောအခါ Sticky Notes အက်ပ်သို့ကျွန်ုပ်သွားသည်။ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုး ၁၀ တွင်ထည့်သွင်းထားသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရောက်ရန်စတင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးစတစ်ကာကပ်ပါ။ ၎င်းသည်ဤတွင်မည်သို့ပေါ်လာသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၎င်းကိုသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ရှိ OneNote အက်ပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်လက်တော့ပ်ပေါ်၌သီးခြား app တစ်ခုအဖြစ်သင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သင်မှတ်စုများကိုသင်မည်သည့်နေရာတွင်ယူသွားပါစေသင်အလိုအလျောက်ထပ်တူပြုသည်။ နံပါတ် (၄) ပုံမှစာသားကိုထုတ်ယူပါ။ နောက်ထပ်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာ Optical Character Recognition (OCR) ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အားသာချက်နှစ်ခုရှိသည်။ နံပါတ်တစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်ပုံများမှစာသားကိုကူးယူနိုင်ပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်စရာမလိုပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်မှတ်စုများတွင် screenshots များကိုကူးယူခဲ့သည်။ ငါကအပေါ်ကို right click တဲ့အခါငါပုံမှစာသားကိုကူးယူရန် option ကိုရ။ ကျွန်မအသစ်တစ်ခုစာမျက်နှာကိုဖွင့်ပုံကနေကူးယူစာသားစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ။
ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအများကြီးအသုံးပြုတဲ့ဒုတိယအကျိုးကျေးဇူးကတော့စာသားကိုရုပ်ပုံနဲ့ရှာဖွေလို့ရတယ်။ ငါများသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မှတ်စုရေးသည့်ဆောင်းပါးများမှသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုစုဆောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်ညှပ်နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုလည်းပြုလုပ်သည်။ အသေးစိတ်ကိုနောက်မှရှာဖွေသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
OCR function သည်ပုံပေါ်ရှိစာသားများကိုလည်းရှာဖွေပြီးရုပ်ပုံများအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပြသသည်။ နံပါတ်ငါး၊ Immersive Reader နှင့်အာရုံစူးစိုက်ပါ။ စာသားကိုအာရုံစူးစိုက်ချင်တဲ့အခါ (သို့) စာဖတ်ခြင်းကိုသုံးချင်တဲ့အချိန်မှာငါသုံးချင်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ Immersive Reader ။
ယခုအခါ၎င်းသည် Word, Outlook နှင့် OneNote ကဲ့သို့ application များစွာနှင့်ပေါင်းစည်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်ရှိ View View တွင် Immersive Reader ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ စာသားအရွယ်အစားနှင့်အရောင်အခင်းအကျင်းအတွက်ချိန်ညှိချက်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်သည်။
ဤနေရာ၌သင်လည်း font ကိုပြောင်းနိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ Comic Sans ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခြေအနေတွင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းကလေးများအတွက်အဆင်ပြေသည်။ G-образသည့်ပုံစံသည်ကလေးများကျောင်း၌စာရေးတတ်ရန်သင်ယူသည့်ပုံစံဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်လည်းသင်၏သားသမီးနဲ့အတူဖတ်လေ့ကျင့်ဖို့ဒီကိုသုံးနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ play ခလုတ်ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပြီးစာသားကိုအသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်ဖတ်စေနိုင်သည်။
ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းသည် ၀ င်ငွေပြန်အမ်းငွေကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့် ၀ ယ်သင့်သည်မရှိမရှိကိုမည်သို့လေ့လာရမည်ကိုလေ့လာပါ။ အသံချိန်ညှိချက်များကသင့်အားအသံအမြန်နှုန်းပြောင်းရန်နှင့်အမျိုးသမီးသို့မဟုတ်အထီးအသံရွေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ Excel template တစ်ခုတည်ဆောက်နေသည်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ, ငါသည် OneNote ကိုအသုံးပြုပါ။ သို့သော်သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အလွန်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်ပုံသဏ္byာန်ကိုလက်ဖြင့်ဆွဲပြီးထို့နောက်ပုံသဏ္onာန်ပေါ်မှင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ OneNote သည်သူတို့ကိုဖြောင့်သောလိုင်းများဖြင့်ပုံစံများသို့အလိုအလျောက်ပြောင်းလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းသောထောင့်များသည်လည်းသင်၏ရေးသားမှုကိုစာရိုက်ထားသောစာများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်ကြောက်သောလက်ရေးရှိသောကြောင့်သံသယရှိသော်လည်း သတ္တုတွင်းကိုပြောင်းလဲဖို့ပင်စီမံသည်၊ ပထမ ဦး ဆုံးသင်ပြောင်းချင်သောအရာကိုရွေးချယ်ရန် lasso ရွေးချယ်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ ထို့နောက် Ink to Text ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သင်၏မှတ်စုများကိုလက်ဖြင့်ရေးပါ။
သငျသညျကိုသင်္ချာပြproblemsနာများအတွက် OneNote ကိုသုံးနိုင်သည်။ ညီမျှခြင်းတစ်ခုကိုလက်ဖြင့်ရေးနိုင်သည်၊ ၎င်းကိုရွေးချယ်ရန် lasso ရွေးချယ်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ ထို့နောက် Math ကိုနှိပ်ပါ။ အထက်တွင်မှ Ink to Math သည်၎င်းကိုရိုက်နှိပ်ထားသောစာသားအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဒါကအားလုံးမဟုတ်ပါ၊ သင်အမှန်တကယ်မေးနိုင်သည်၊ ရွေးစရာတစ်ခုကိုကလစ်နှိပ်ပြီးညီမျှခြင်းကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်စိတ်ဝင်စားပါက stepson ကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုပြနိုင်သည်။ တော်တော်အေးတယ်ဟုတ်လား သင်၏ဆရာများကိုမပြောပါနှင့်။
OneNote နှင့် OneNote 2016 သို့မဟုတ် OneNote 2016 ကဲ့သို့သောမူကွဲအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းကိုယခုအခါ OneNote ဟုသာခေါ်သည်။ ဒါဟာ Windows တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Mac Plus အတွက်လည်း၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးသင်၏စက်ပစ္စည်းအားလုံးတွင်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပိုမိုစနစ်တကျနှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းရန် OneNote ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သောနည်းလမ်းအားလုံးရှိသည်။
သင့်တွင်အကြိုက်ဆုံးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိပါက၎င်းတို့ကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ၊ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်မဖော်ပြခဲ့သော OneNote နှင့်မျှဝေရန်အသစ်တစ်ခုရှိပါကအောက်ပါအတိုင်းမျှဝေပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအချိန်နှင့်အချိန်တိုအတွင်းပိုမိုအောင်မြင်လိုလျှင် Skillshare တွင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသင်တန်းများတက်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ Skillshare သည်ထောင်နှင့်ချီသောစိတ် ၀ င်စားစရာသင်တန်းများနှင့်ခေါင်းစဉ်များဖြစ်သောကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ အလွတ်တန်းများ၊ ရုံးကျွမ်းကျင်မှုများကဲ့သို့သောနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အခြားအရာများစသည်တို့ပါဝင်သည်။
Skillshare မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးသင်ခဲ့တဲ့သင်တန်းတစ်ခုကတော့ Simple Productivity, Less and More လုပ်နည်း။ ဒီသင်တန်းကကျွန်မရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုစာရင်းကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားစေတယ်။ ငါသိတာကအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာငါဘယ်လောက်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမဟုတ်ဘဲအရေးကိစ္စတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ဘဲအဲဒါကိုမလွယ်ကူဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရာအားလုံးကပထမတစ်ချက်မှာအရေးကြီးတယ်။
ငါ့ကိုကူညီဖို့ဒီသင်တန်းမှာမျှဝေထားတဲ့ကိရိယာတွေကိုကျွန်တော်တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤသင်တန်းကိုတက်ရောက်ရန်သို့မဟုတ် Skillshare ရှိထောင်ပေါင်းများစွာသော c အတန်းတစ်ခုခုကိုတက်ရောက်ရန်စိတ်ဝင်စားပါက၊ နှစ်အကန့်အသတ်မရှိအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည့်အခမဲ့လစာ ၂ လအခမဲ့ရရှိနိုင်သည့်အောက်ပါဖော်ပြချက်အကွက်ရှိ link ကိုနှိပ်ပါ။ နှစ်လကြာပြီးနောက်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုသည်တစ်လလျှင် ၁၀ ဒေါ်လာထက်မနည်းသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်များကိုလေ့လာရန်အလွန်စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်စေသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုတိုးတက်စေရန် OneNote လုပ်နိုင်ပုံကိုအကြံဥာဏ်များပေးခဲ့သည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်တော်မိုက်ကရိုဆော့ကိုသုံးလို့ရမလားOneNote အော့ဖ်လိုင်း? သင်လုပ်နိုင်သည်! သငျသညျမသွားမီ OneDrive နှင့်သင်၏မှတ်စုစာအုပ်တိုက်ဆိုင်ညှိယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အော့ဖ်လိုင်းထို့နောက်OneNoteသင်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်သင်၏ပြောင်းလဲမှုများကိုအလိုအလျောက်စည်းညှိသည်။ အကယ်၍ သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုအချိန်မရွေးဆုံးရှုံးနိုင်လျှင်၎င်းကိုပိတ်ထားပါကဆိုင်းငံ့ထားသောပြောင်းလဲမှုများသည်သင်အွန်လိုင်းပြန်ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်စည်းညှိလိမ့်မည်။ဇူလိုင် ၁၈ 2018
OneNote2016 သည်သင်၏မှတ်စုများအားလုံးကိုသင်၏ထံမှသိမ်းဆည်းထားသည်မှတ်စုစာအုပ်ပုံမှန်အားဖြင့်နေသောသိမ်းဆည်းထားမင်းရဲ့စာရွက်စာတမ်းများသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တိကျတဲ့ဖိုင်တွဲထဲမှာဖိုင်တွဲ။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဖြစ်ကြသည်သိမ်းဆည်းထားMicrosoft က OneDrive ပေါ်မှာ။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်မှတ်စုစာအုပ်တွေကိုသိမ်းထားပါသင်၏ကွန်ယက်ပေါ်တွင်မျှဝေထားသောတည်နေရာတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်။ဇူလိုင် ၁၇ 2019
- ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, Pete Moriarty ။ ငါရေဗက္ကာမှဖြေဆိုရန်တဦးတည်းကိုပိုမိုဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရှိသည်။ ပြီးတော့ရေဗက္ကာက 'ငါ့ရဲ့ဖိုင်တွေအားလုံးကိုမိုးတိမ်၊ ဂူဂဲလ်ဒရိုက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာထားတာအကောင်းဆုံးလား' ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုစည်းညှိသင့်သလား။ ငါ့ကွန်ပျူတာပေါ် '(မသင့်တော်သောဂီတ) ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအီးမေးလ်လိပ်စာရသောအခါ ၉၀ မှလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Inbox အတွင်းရှိ spam အီးမေးလ်များကိုဖျက်ခြင်းအားဖြင့်နေရာချွေတာချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့ကိုသင်ရသောအခါ Microsoft Outlook ၏နေ့ရက်များကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည့်အီးမေးလ်များစွာရှိသည်။ သင့်ရဲ့ဒေသခံဒေတာဖိုင်ထဲမှာအီးမေးလ်တွေအများကြီးရတယ်။ အဲဒါကဖြည့်စွက်မှာပါ၊ ပြီးတော့ကျနော်တို့ကကျောနောက်ကိုစလိုက်ပြီစတာနဲ့။
ပြီးတဲ့အခါရှာဖွေမှုကရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်၊ Outlook ကပြိုလဲသွားပြီးဒီပြproblemsနာအားလုံးကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒီသမိုင်းဝင်အဖြစ်အပျက်တွေကိုအခြေခံပြီး၊ ငါတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အခန်းတွေကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့၊ သင်၏ hard drive ကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ငါတကယ်စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်၊ ရိုးရိုးဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်မှုနေရာကိုအကန့်အသတ်မဲ့သာထားရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် G Suite ကိုအသုံးပြုပြီးစီးပွားရေးအစီအစဉ်ကိုရယူပါကအကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းနိုင်သည့်နေရာရရှိမည်။
ထို့အပြင်မျှတသောကစားနည်းမူဝါဒအရကန့်သတ်ချက်မရှိသောကြောင့်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်တွင် 4K drone ရိုက်ထားသောတာဘိုက်နှင့်တာဘိုက်တာဘိုက်များ၊ ကျွန်ုပ်၏ Google Drive တွင်သိမ်းဆည်းထားသောအရာများမနှေးကွေးသော၊ ကျွန်ုပ်၌ကျွန်ုပ်မည်မျှရှိသောအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ Google ကဘယ်သောအခါမျှမတိုင်ကြားပါ။ ဒါကြောင့်မင်းက 'ဟေ့ငါငါ့ရဲ့ဒီဂျစ်တယ်ခန်းတွေကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားသင့်တယ်' လို့စဉ်းစားနေတုန်းပဲ၊ စိတ်မပူပါနဲ့၊ Google ရဲ့ထိရောက်စွာအဆုံးမဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုသာသုံးပါ။
ယခု၊ အထူးသဖြင့် 'ကျွန်ုပ်၌ဖိုင်များထားသင့်သလား။ '' ဒါမှမဟုတ်ရှိသမျှတို့ကိုငါသည်မိုဃ်းတိမ်၌သူတို့ရှိသင့်? ' Google Drive File Stream ဟုခေါ်သော application ဖြင့်လွယ်ကူစေသည်။ ပြီးတော့ Google File Stream ကသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပါ။ ၎င်းသည် Google Drive ထပ်တူပြုခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ ယခုတွင် Google Drive အက်ပလီသို့မဟုတ် Dropbox ကဲ့သို့ File Stream သို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးအထူးအင်္ဂါရပ်အချို့နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်သည်။
ထို့ကြောင့် Google Drive အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ် Dropbox အက်ပ်ဖြင့်မည်သည့်ဖိုင်တွဲများကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်နည်း။ ဒေသအလိုက်၎င်းနှင့်ဝဗ်ပေါ်ရှိမည်သည့်ဖိုင်တွဲများကိုကျွန်ုပ်လိုချင်သည်။ ပြီးတော့သင်အဲဒီအချက်အလက်တွေကိုတစ်နည်းနည်းနဲ့စီမံပြီးကိုယ်တိုင်စဉ်းစားရမယ်။ File Stream သည်ဤအရာအားလုံးကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်သော်လည်း Google File Stream ကဘာလုပ်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ သင်၏ဂူဂဲလ်ဒရိုက်ပေါ်တွင်သင်၌ရှိသောသင်၏ဖိုင်များအားလုံးကိုသိမ်းယူပြီး၎င်းတို့ကို local desktop မှမြင်တွေ့နိုင်သည်။
ဒါကြောင့်သင်က Cloud ကိုကြည့်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သင်ဟာ local desktop ကိုအမှန်တကယ်ကြည့်နေတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Mac, PC သို့မဟုတ် Chromebook ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်သင်၏ Google Drive အားလုံးကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ သင်၏အဖွဲ့လိုက် drives များကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဤဖိုင်များအားလုံးကိုသင်မြင်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုဖွင့်သောအခါ၊ ဂူဂဲလ်သည်၎င်းတို့ကိုနောက်ခံတွင်အမှန်တကယ် download လုပ်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်သင်က 'ဖွင့်' ခလုတ်ကိုမနှိပ်မချင်းကွန်ပျူတာကိုသိမ်းဆည်းထားမှာမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီဖိုင်ကိုဖွင့်တော့မယ်၊ ဂူဂဲလ်မှာ AI ဗဟုသုတအချို့ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကဖိုင်တွေကိုနောက်ခံမှာအလိုအလျောက် download လုပ်လိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့သည်နောင်တွင်မည်သည့်ဖိုင်များကိုသင်အသုံးပြုလိုကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပြီး၎င်းကိုသင်ထပ်မံဖွင့်ရန်အလိုရှိလျှင်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်အသုံးပြုခဲ့သောနောက်ဆုံးပေါ်ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။ အကယ်လို့သင်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်နေရင်ဒီဖိုင်တွေထဲကတစ်ခုကိုထပ်မံ ၀ င်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ Google File Stream ကနေတစ်ဆင့်သင်သွားတဲ့လမ်းကိုကလစ်လုပ်ဖို့လွယ်ကူစေပြီးဖိုင်ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ ယခုတွင်သင်သည် 'ငါအော့ဖ်လိုင်းလုံးဝပိတ်ထားရင်ဘာလုပ်ရမလဲ' ဟုသင်မေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အော့ဖ်လိုင်းလုံးဝနှင့်သင်ဖိုင်တွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုင်တစ်ခုကို Google File Stream ကိုအသုံးပြုလိုပါက၎င်းဖိုင်ကို right-click နှိပ်၍ ကျွန်ုပ်ဤဖိုင်ကိုအော့ဖ်လိုင်းသိမ်းဆည်းထားလိုကြောင်း၊ ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲကိုအော့ဖ်လိုင်းသိမ်းဆည်းပြီးထပ်တူပြုသည်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဆင်း။
ယခုတွင်သင့်တွင်ဖိုင်များစွာရှိနေပြီး၎င်းတို့ကို Cloud သို့ upload တင်ပါသို့မဟုတ်သင်၏ Google Driv တွင်ထည့်သွင်းလိုပါက၎င်းကို File Stream သို့ဆွဲချ။ သိမ်းနိုင်သည်ဆိုပါစို့၊ Google က၎င်းတို့အားလုံးကို upload တင်ရန် Google Drive တွင်အွန်လိုင်းလုပ်လိမ့်မည် , ပြီးတော့သူကဒီနည်းနည်းသန့်ရှင်းရေးလုပ်နှင့်ဒေသခံသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်။ ငါဒါရှိသင့်တယ် အွန်လိုင်းလား၊ အော့ဖ်လိုင်းလား။ ကိစ္စမရှိပါဘူး ၎င်းတို့အားလုံးကိုသင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်မှအရန်ကူးထားပေးသည်။
ဖိုင်များသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းကိုအမြဲတမ်းသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သို့သော် File Stream သည်သင် Google Drive အက်ပလီကေးရှင်းအဟောင်း၌ရှိခဲ့ဖူးသောခန့်မှန်းချက်ကိုအမှန်တကယ်ဖယ်ရှားပစ်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်ရွေးချယ်သောစည်းညှိမှုများကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန် Dropbox အက်ပလီကေးရှင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သေးသည်၊ ကျွန်ုပ်ဤဖိုင်ကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ချင်သလား။ File Stream သည် AI ကိုသာအသုံးပြုပြီးထိုအရာအားလုံးကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီဖိုင်တွေဘယ်လိုလိုမလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။
အကယ်၍ သင်အော့ဖ်လိုင်းများကိုသင်အလိုရှိလျှင်၊ အော့ဖ်လိုင်းတွင်ရှိနေရန်အတွက်တိကျသောဖိုင်တွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုင်တည်ဆောက်ပုံကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအရာများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်သာထားလေ့ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Google File Stream ကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် File Stream၊ Google Drive၊ လှိမ့်ထွက်ခွင့်၊ ခွင့်ပြုချက်များကိုတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း (သို့) သင်မည်သို့စစ်ဆေးသည်ကိုစစ်ဆေးရန် ' အရာဝတ္ထုများကိုတပ်ဆင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့၊ itgenius.com သို့ဆက်သွယ်ပါ၊ သို့မဟုတ်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မက်ဆေ့ခ်ျပို့။ နောက်လာမည့်ဆောင်းပါးတွင်ရွှင်မြူးစွာကြိုဆိုပါ။